China HSL-YTJ2621 okuzenzakalelayo Glass Cutting Machine abakhiqizi nabaphakeli | Huashili
Function Imisebenzi ejwayelekile Ukusika isoftware yokwenza kahle Ukusika ingilazi eyi-1.Professional nokwenza umsebenzi wokusetha kabusha ubuhle: kuthuthukisa kakhulu izinga lokusika ingilazi nokusebenza kahle kokukhiqiza.
Ihambisana ne-Italian OPTIMA software elungiselelwe kanye nekhodi ye-GIYOU yesoftware ejwayelekile yasekhaya: Qaphela ukuhlangana kwamafayili wefomethi ehlukile.
Ukuxilongwa kwe-3.Fault nokusebenza kwe-alamu: Ingarekhoda ngokuzenzakalela isimo esisebenzayo somshini kunqubo yokukhiqiza, i-alarm alarm kanye nezinkinga zokubonisa.
Fibre laser ukuma
1.Ukuzitholela onqenqemeni okuzenzakalelayo nokubeka ingilazi: Ukulinganisa okuqondile kwesimo sangempela ne-engeli yokuphambuka kwengilazi, ukubona ukulungiswa okuzenzakalelayo kwendlela yokusika yensimbi, nokwenza ngcono ukusebenza kahle
2.Ukuskena okwenziwe ngokukhaliphile: Umtshina angakwazi ukuskena izinto ezinokwakheka ngobuhlakani futhi azenzele ngokuzenzakalela ihluzo ukubona ukusikwa kwentaba.
Umsebenzi ongawukhetha Umsebenzi wengalo yeTelescopic Ukucaciswa okuphezulu kwe-pinion ne-rack drive kuyamukelwa esikhundleni se-screw drive sokuqala, isikhathi ngasinye lapho ukulayishwa kuqedwa ukunyakaza kwengalo ye-telescopic, umshini awudingi ukuhamba.
Ingalawulwa ngekhompyutha ngokuzimela, futhi ukulayishwa nokusika okuzenzakalelayo kungaqedwa ngaphandle kokungenelela okwenziwa ngesandla, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle;
Ngenxa yokwehliswa kwesibalo sokuhamba, ukugqokwa kwemishini kuncishisiwe kakhulu futhi impilo nokuqina komshini kuyathuthukiswa.
Ukulebula okuzenzakalelayo Miselela ilebula yesandla. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, amaphrinta aprinta amalebula aqopha imininingwane yengilazi.
Ilebuli isetshenziswa engxenyeni yengilazi ehambisanayo ngesilinda sokulebula.
(Sincoma amakhasimende ukuthi alungiselele umsebenzi wokulebula)
Umsebenzi wokwephula ingilazi Faka induku ye-ejector epulatifomu yokusika.
Isilinda sidudula induku ye-ejector ukunqamula ingilazi.
EzokuthuthaIzici Ugongolo lokusika lufakwe i-conveyor sucker. Akunasidingo sokuhambisa ingilazi ngesandla.
Ingilazi esikiwe ingadluliselwa emoyeni etafuleni eliphuza ingilazi ngokusebenzisa i-conveyor sucker, futhi ukusebenza kokugqashuka kwenziwa etafuleni lokuqaqa ingilazi.
Isigaba Iphrojekthi Ukufundiswa Kwephrojekthi Qaphela
Ukumiswa komkhiqizo Ingxenye yemishini Umshiniifreyimu Ukwelashwa kokuguga ngemuva kokushisela izingxenye ezijiyile. Uhlangothi ugongolo ukulungisa ipuleti icutshungulwa gantry Milling ukuqinisekisa ukunemba nokusimama.
Ugongolo oluyisicaba I-X-axis ne-Y-axis eqhuba imishayo eyisicaba yamukela amaphrofayili we-aluminium alloy ahlukile enelungelo lobunikazi, anamandla aphezulu nokunemba okuphezulu, futhi ahlala isikhathi eside futhi azinzile.
Umugqa Ukwamukela i-helical rack ne-pinion isakhiwo ukuthuthukisa amandla wamazinyo futhi wehlise ngempumelelo umsindo
Ukutholakala kukawoyela Ukunikezwa kukawoyela wensimbi yokusika isebenzisa indlela yokugcwalisa uwoyela othomathikhi womoya, ngaphandle kokungenelela okwenziwa ngesandla.
Umlandeli Ifenisha yamandla aphezulu eyenziwe ngokwezifiso, umfutho womoya ophezulu nokugeleza okukhulu, kuqinisekisa ukuntanta kwengilazi okushelelayo.
Ukusika idrayivu yemoto 2 setha ukusebenza okuphezulu kwezimboni ukulawula kwe-servo motor yokulawula okuqondile nokusebenza okubushelelezi.
IMesa Ibhodi elingangeni manzi kakhulu yi-substrate, futhi ingaphezulu limbozwe umuzwa wezimboni we-anti-static. Qinisekisa ukusetshenziswa okuzinzile ezindaweni ezinomswakama.
Izingxenye zikagesi Ukusingathwa kwekhompyutha Ukusebenza okuphezulu kwekhompyutha kokulawulwa kwezimboni; isibonisi sokucaca okuphezulu.
Isilawuli Ikhadi lebhodi lokulawula elikhethekile leHuashil, uhlelo olufanayo lokulawula iToshiba PLC.
I-fiber ebonakalayo Isebenzisa imitshina ye-Panasonic laser engeniswe eJapan.
Isici Kungeniswe izingxenye zomhlaba jikelele zomugqa wokuqala zomkhiqizo njenge-OMRON, iPanasonic.
Amapharamitha wezobuchwepheshe Amapharamitha womshini Ubukhulu Ubude * ububanzi * ukuphakama: 3000mm * 4700mm * 1420mm
Ukuphakama kwetafula 880 ± 30mm (izinyawo ashintshekayo）
Izidingo zamandla 3P, 380V, 50Hz
Kufakiwe power 13kW, Sebenzisa amandla3KW
Umoya ocindezelweyo 0.6Mpa
Icubungula amapharamitha Sika usayizi wengilazi MAX. 2440 * 2000mm
Sika ukushuba kwengilazi 2 ~ 19mm
Isivinini ikhanda ugongolo X-eksisi 0 ～ 200m / iminithi (ingasethwa)
Ijubane lekhanda I-eksisi engu-0 0 200m / min (ingasethwa)
Ukusika ukusheshisa ≥6m / s²
Ukusika isihlalo sommese Ukusika ikhanda kungazungeza ama-degree angama-360 (ukusika okuqondile kwemigqa eqondile nobubunjwa obukhethekile)
Ukusika ukunemba （± 0.2mm / m （Ngokuya ngosayizi womugqa wokusika ngaphambi kokuphuka kwengilazi）
Name Umkhiqizo Isizwe Isici Qaphela
Isoftware yokwenza kahle Guiyou I-China
Ukusika isoftware Weihong I-China Ukunemba okuqinisekisiwe
Umugqa wesitimela oyisikwele Ukunqoba ETaiwan
Izakhi zikagesi I-AirTAC ETaiwan
Solenoid valve I-AirTAC ETaiwan
Iswishi ye-Photoelectric Omron EJapan
Isifaki khodi Omron EJapan
Ukusika ummese UBuhle EJalimane
Ulayini othambile ophakeme UKangerde I-China
I-Windpipe Ukuphuma kwelanga ETaiwan
XX eksisi servo motor UKUFA I-China 1.8KW * 2 Ama-Intel chips
Y eksisi servo motor UKUFA I-China 2.2KW
Ukunyathela imoto EKP I-China 1kw
Uhlelo Lokulawula UToshiba EJapan
Oxhumana naye Schneider EFrance
Inverter JRACDRIVE I-China
Umephuli I-AirTAC ETaiwan
Ukuthwala okuyinhloko NSK EJapan
Ukudluliswa okuphakathi I-AirTAC ETaiwan
Idivayisi ye-Air flotation Ukwenza ngokwezifiso I-China Ukwenza ngokwezifiso 3KW
Ukushintshela eduze Omron EJapan
Iskena IPanasonic EJapan
Uhlelo lokuthola iphutha HUASHIL I-China
Indawo yokubeka amagiya Ukunqoba ETaiwan
Qaphela：Ngenxa yokuthuthuka okuqhubekayo kwemishini, eminye imininingwane izoguqulwa, futhi abasebenzi bebhizinisi ababonayo bazosebenza ngemodeli yakamuva.
Langaphambilini HSL-CNC3826 okuzenzakalelayo Glass Cutting Machine
Olandelayo: HSL-YTJ3826 okuzenzakalelayo Glass Cutting Machine + HSL-BPT3826 Glass Breaking Table
Okuzenzakalelayo Flat Glass Cutting Machine Inani
Okuzenzakalelayo Laminated Glass Cutting Machine
Okuzenzakalelayo Okugcwele kwe-CNC Glass Cutting Machines
Okugcwele okuzenzakalelayo Glass Cutting Machine
Glass okuzenzakalelayo Iyalayisha Futhi Machine Cutting